आइ फोन ७ किन्ने कि अरु मोबाइल किन्ने त ? भिडियोे | CanadaKhabar.com
आइ फोन ७ किन्ने कि अरु मोबाइल किन्ने त ? भिडियोे
सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एक मात्र सुचना र प्रबिधि बारे प्रसारण हुने कार्यक्रम आइटी ग्यालरीको भाग २१ सार्बजनिक भएको छ। यस कार्यक्रममा सुचना प्रबिधि सम्बन्धिथुप्रै नै जानकारी मुलक कुराहरु समावेश गरिन्छ अनि बजारमा आएका नयाँ ब्राण्डका इलोक्ट्रोनिक सामानहरुको बारेमा जानकारी दिइन्छ।
आइटी ग्यालरीको यो एपिसोडमा बजारमा भर्खरै लन्च भएको आइफोन ७ को बारेमा जानकारी दिइनुका साथै अरु लन्च भएका अन्य ब्राण्डका मोबाइलहरुको बारेमा पनि थुप्रै कुरा बताईएो छ । बजारमा कुन मोबाइल फोन सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एक मात्र सुचना र प्रबिधि बारे प्रसारण हुने कार्यक्रम आइटी ग्यालरीको भाग २१ सार्बजनिक भएको छ। यस कार्यक्रममा सुचना प्रबिधि सम्बन्धिथुप्रै नै जानकारी मुलक कुराहरु समावेश गरिन्छ अनि बजारमा आएका नयाँ ब्राण्डका इलोक्ट्रोनिक सामानहरुको बारेमा जानकारी दिइन्छ।
आइटी ग्यालरीको यो एपिसोडमा बजारमा भर्खरै लन्च भएको आइफोन ७ को बारेमा जानकारी दिइनुका साथै अरु लन्च भएका अन्य ब्राण्डका मोबाइलहरुको बारेमा पनि थुप्रै कुरा बताईएो छ । बजारमा कुन मोबाइल फोन आए र त्यसका बिशेषताहरु के के हुन भन्ने कुराहरुको जानकारी समाबेश गरिएको छ । यदी यस्तै तपाईहरु पनि टेक्नोलोजी सम्बन्धि बिबिध कुराहरुको ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमले तपाईहरुलाई ठुलो मद्दत पुराउने छ ।
र त्यसका बिशेषताहरु के के हुन भन्ने कुराहरुको जानकारी समाबेश गरिएको छ । यदी यस्तै तपाईहरु पनि टेक्नोलोजी सम्बन्धि बिबिध कुराहरुको ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कार्यक्रमले तपाईहरुलाई ठुलो मद्दत पुराउने छ ।